Ngaphambi kokuba bathathe Ukusabalala nezokusigcoba enjalo kuze kube manje isihloko njengoba tableware abanekhono - ngesidlo sasekuseni lapho, kwasemini noma dinner, mayelana nanoma celebration, kusamelwe ingenzele ukubaluleka langempela umqondo uqobo. Kufanele kuqashelwe ukuthi umbuzo indlela ukumboza kahle etafuleni, ngokuthi namuhla, singamakhosikazi emizi eziningi. Futhi ulwazi ngalesi sihloko kungatholakala uquqaba. Yilokho nje hhayi ngaso sonke isikhathi basinikeze kwesokudla. Abaningi labo abazibheka uchwepheshe bodumo ezindabeni ezinjalo, kukhona ogxile iphutha lapho, ukhuluma ngani, bathi, indlela ukubeka itafula ukudla kwakusihlwa, baqale izintshumayelo kwabo nala mazwi, "zisakaze kwendwangu enhle, ukubeka amakhandlela ungakhohlwa mayelana isixha ..." Kungani ? Ngoba ngisho ukucabanga ngakho, ukudida imiqondo ezimbili ezihlukene ngokuphelele - umhlobiso langempela kanye tableware. Ngakho ake ukubhekana.
Igama elithi "ukukhonza" (kusuka isevisi, noma servir) kusho lutho ngaphandle isevisi. Okokuqala, futhi ekuqaleni kwazo inqubo gade kuwufanele lula. Ngakho lapho sikhuluma kanjani usadinga itafula kahle, kufanele uqale uwuqonde elungile futhi ukhululekile, ukucindezeleka, ukulinganisela Cutlery izinto. Yonke enye into - kwendwangu yetafula, izimbali, amakhandlela okunye okujabulelayo - kungcono nje umhlobiso etafuleni. Lutho. Yini esingasithola lesi siphetho? Enembile futhi ecacile: kunezindlela eyamukelekayo tableware, okuyinto eyenziwa imithetho ezingeguquleke, ayalolongwa eminyakeni futhi ebekwe nenhlonipho ukuphi. Nakuba etafuleni engase aklonyeliswe ngokuvumelana emcabangweni wakho siqu futhi, mhlawumbe, okungenani encane kakhulu uma kuqhathaniswa ingqondo. Libuye libe uhlobo art, ngeke baxabane. Kodwa futhi ku ngokunemba kulesi simo ngeke sisakwazi ukukhuluma. Ngaphandle ukuntuleka ukunambitheka ... Kodwa ake hhayi ngezinto edabukisayo. Kungcono ukuya ngqo iphuzu.
Ukwazi imithetho eyisisekelo kuzosiza hhayi kuphela ilungelo lokunquma etafuleni, kodwa sokungafuni ukulahlekelwa isithunzi, uma ngokungazelelwe kufanele abe isimenywa kwamanye reception emangalisa-nemfashini. Ngisho ngaphandle kokuba umbono ocacile walokho senzelwe inqwaba ebhekene amadivayisi unga ngokwanele aphume isimo, sithembele wokwazi indlela classical. Plates sethebula Ngokwemvelo ezahlukene, kodwa okufana ejwayelekile uhlale maphakathi imele ipuleti esishisayo, kukhona ngaphansi lapho ibha isidlo. Ukuze wakhe washiya walala egunjini lokudlela ekuphambukeni, kulandele inhlanzi, ekugcineni - plug Diner. imimese Right wahlela etafuleni ukulandelana izinhlanzi isidlo. Ucedzela "inqubo" isipuni. Kutholwe ngaphezu isibambo ugqoko ohlangothini lwesokunene dessert spoon, isibambo kuze kufike ohlangothini lwesobunxele - dessert ekuphambukeni. Ukuze kwesokunxele ipuleti esikhulu ukuze kubekwe isinkwa esitshisayo nebhotela ummese (ukusingatha kuya kwesokudla), esisogwini izibuko kwesokudla: amanzi, iwayini omhlophe, newayini elibomvu.
Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi lokhu ilungiselelo wonke amadivaysi a classic nakuba ayengafiki ngaso sonke isikhathi, yebo, ezifanele. Ngakho, ngokwesibonelo, pre-bakhonze ithebula for sasekuseni akudingi zalelo nani elikhulu izifundo. Kodwa uma umuntu wamukelekile edilini okuhleliwe, yebo, ukunamathela le mithetho, uzokwazi ukuba ngokwanele futhi kahle itafula.
Kodwa akumelwe sikhohlwe ukuthi kuphela "alungise" Ukukhonza ngokwemvelo, ngokwengxenye enkulu, alikho. Ngokwesibonelo, eFrance, ekuphambukeni njalo ibekwe ukuze amazinyo wabheka phezulu eNgilandi - kunalokho. Ngakho-ke, uma konke kusenjalo futhi kuyoba okokuqala ukwenza amaphutha, kungenzeka, ngaphandle batting iso, ukusho tableware ukuthi lanamuhla (kwasekuseni, isibonelo, noma ukuthola izivakashi) - okukhethwa kukho Irish. Ngubani empeleni, umane, ukusebenzisa hlola, kwakuyiqiniso yini noma cha?
Imithetho eyisisekelo noma Ukugada ithiphu
Uma ufuna ukufunda indlela itafula kahle, udinga ukukhumbula into eyodwa: kufanele unamathele isitayela! Ngisho noma jagged indawo nezinkezo, izimfoloko, izibuko futhi benza konke kahle, izitsha lungakufanelekeli nethebula amasethi ngemibala lemitsatfu leyehlukene ngabe negate yonke imizamo yenu. Khumbula - uhlelo ukufana Cutlery kanye nezinye izakhi - lokho isihluthulelo sempumelelo. Futhi ungakhohlwa: okufanayo akufanele kube nje uhlobo amadivayisi, kodwa futhi indawo yabo. Futhi noma ngabe abeke etafuleni isethi ubuncane kubo, kodwa ngendlela efanele futhi kahle, akekho onesibindi ukujikijela itshe wena. Ngaphezu kwalokho, akufanele sikhohlwe ukuthi zakudala, yebo, kuhle, kodwa akekho azenqabelayo ukuba ehlukahlukene ke. Zikhona nezinye izitayela kwethebula.
Ngakho uma izolo endaweni rush imizwa banged phansi, ezimbili zenkonzo yalo engcono, ngakusasa, lokuqoqa izinsalela okunethezeka ndawonye, unezela ambalwa izingcezu ngokokuhlobisa wasebenza ikhanda lakhe, ungakwazi ukulungisa isimo, bese ngeqholo nangamehlo isithunzi ukusho ukuthi namuhla abakhonza ithebula for sasekuseni eyenziwe hi-tech isitayela. Futhi, ungasetha etafuleni ngesiNgisi, isi-Japanese, yobuhlanga, isitayela romantic. Nokho, kukhona abaningi kangaka ukuthi - ngesihloko ukuze uthole enye ingxoxo. Futhi thina, kufanele siphethe ngokuthi kakade kahle izinto eziyisisekelo futhi khumbula imithetho lokukhonza, sikhamba theory abakuyo.
Professionals futhi ngaphandle kwethu ukwazi ukuthi ukubeka itafula esitolo sakhe. Sizofunda ukukwenza ekhaya. Ithebula, nice and ehlotshisiwe kahle wamboza, Asigcini ukukhulisa iphango, emagugu olumnandi, kodwa ifundisa imithetho yokuziphatha kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Yiqiniso, omama abaningi uzama ukuba nikhonze samaholide etafuleni ekhaya ngezimpelasonto noma ngesikhathi celebration umndeni. Kodwa udinga ukuziqeqesha ukukwenza nsukuzonke, kunoma eyanele yokudla. Ngakho ake sixoxe ngokukhethekile ngalokho kubonakala sengathi ithebula kulungiselelwa for kwasekuseni, kwasemini kanye dinner.
Njengomthetho, pre-bakhonze ithebula for sasekuseni kusikisela iqoqo ubuncane amadivaysi. Ngalesi sikhathi, hhayi ngokuvamile babekhonza ezihlukahlukene izitsha ezahlukene, konke ngokushesha ngoba, njengoba umthetho, phuma ku ebhizinisi ngosuku. Kodwa ngalolo suku ekuseni baqala kahle kanti icala lonke usuku yasendlini omuhle, zama itafula kahle futhi ngokuhambisana nenhlonipho bakhonze. Ungacabangi kungcono ukuthi elula. Ukukhonza etafuleni ekhaya - lokhu futhi uhlobo art.
Okokuqala, sahlela isidlo amapuleti, bese lesi sitsha. Beka spoon encane isibambo esosweni ngakwesokudla, ngendlela efanayo kumele itholakale futhi isibambo phezu inkomishi. Kuyinto esimweni ezinjalo elula kunazo ukusebenzisa. Uma imenyu Iqanda futhi kuphekwe "Kukhonani kulesi sikhwama sakho" noma soft-abilisiwe ke badinga bondliwe othini ekhethekile. Its a Diner ipuleti ngesipuni ekhethekile. Ukuze okusanhlamvu wagqoka Snackbar ipuleti ezijulile. Odinga ukuthulula iziphuzo ezishisayo kusukela imbiza ikhofi noma ngeketela, futhi idivayisi ke shiya phakathi etafuleni. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi ngaphambi kwaba ezikahle ukufinyelela. Cakes and zonke izinhlobo sandwich olubekwa isidlo ebanzi, bese futhi ngiyibeke maphakathi etafuleni. Kuphoqelekile etafuleni kufanele babekhona usawoti shaker, ipuleti ne bhotela, ushukela isitsha. Horseradish, lwesinaphi fed kwesidzingo. Isinkwa ukubeka eceleni (kungenziwa elakhelwe lokhu isidlo noma ipuleti).
I lula zinakekelwe ka, ungakhohlwa mayelana ubucwebe. Uma kunjalo isinqumo uwayehlalise, ithebula kungenziwa limbozwa ngendwangu, kodwa uma kungenjalo, ungakwazi abeke ipuleti ngaphansi napkins zokuhlobisa. Phela, lo wokugcina (kuvamise version iphepha) nalo abeke etafuleni ungulotimele ekhethekile. Ukuba khona isitsha sezimbali ezincane izimbali nazo wamukelekile. Esikhathini isithombe ungabona ukuthi kubukeka kanjani ebeka etafuleni for sasekuseni (zikhona izithombe embhalweni). Kodwa kunjalo, ngokuvamile, izibonelo. Wena, njengoba ehlonipha imithetho eyisisekelo, ungakwazi ukuhlola kanye ukuhlobisa itafula noma khetha isitayela ngokuvumelana okuthandayo.
Oku-ebeka etafuleni eyodla kakade kusikisela ukuba khona inomboro ekulu amadivayisi. Noma kunjalo, imikhaya eminingi, ngokuvamile leso kusuke uhlobo eyinhloko ukudla. Njengomthetho, kukhona isidlo kwimenyu yokudlela, Yiqiniso kokuthoma, kwesibili futhi - cishe njalo - abanye dessert. Okuphoqelekile imfuneko - khona okusheshayo amapuleti ukudla, imimese, izimfoloko, nezinkezo.
Njengoba izifundo kuqala, bese badinga isidlo ezijulile noma indebe ye umhluzi. Ngaphansi kwazo njalo ukubeka Podstavochny ipuleti. Hot ngokuvamile babekhonza Usesebenze ngaphansi izingqoko kusengaphambili. Kuleso simo, uma imenyu inhlanzi, uzodinga ukwengeza ithuluzi ummese akhethekile ekuphambukeni, spatula, ngawo sizokwazi ukuhlukanisa amathambo inyama. Dessert efanayo kufanele ahanjiswe ekupheleni, futhi kuphela ngemva kokuba etafuleni retracts izitsha ezingcolile.
Kulokhu, efana ukukhonza ibhulakufesi, umehluko kuphela siwukuthi izingqimba awadingekile ngenxa isobho. Isibalo izitsha dinner, kanye nenani izitsha main athembele ngokuphelele imenyu.
Eyodla etafuleni kanye kakade dessert amapuleti, ohlangothini lwesobunxele wabo ukubeka ekuphambukeni ngakwesokudla - imimese. Futhi, yebo, dessert. Uma ngokuvamile bayathanda ukuba baphuze ingilazi yewayini eyodla, isiphuzo okuhambisanayo uhlele izitsha njengoba kwavezwa ngendlela yakudala obeka etafuleni.
Cover etafuleni for the holiday
Njengoba isibonelo, ukuthatha iholidi kahle ithandiwe - usuku lokuzalwa. Kulokhu, ukwamukela egqamile futhi yasekuqaleni ithebula kulungiselelwa. Futhi ukuze uyenze ibe ngempela Kwatholakala, kubalulekile ukwelekelela umhlobiso. Okungukuthi, uma sikubeka kalula, ukuhlobisa. Kuyafaneleka abeke etafuleni lace nenhle kwendwangu, okunikela etafuleni ukubukeka zemikhosi.
Kudingeka futhi zonke izinhlobo izesekeli extra: obhasikidi izithelo, nezitsha isaladi, isitsha sezimbali, iwayini nenhle futhi yasekuqaleni izibuko futhi yewayini. Vase ka izimbali kufanele ibekwe eduze isephulamthetho kwenziwe lo mkhosi, kodwa ukuze awubhekene kepha yena isibuyekezo. Izithelo - a imfanelo esiyisibopho ithebula iholide. Baskets nabo (okufanayo ngokwemvelo) ahlelwe ngokuvamile kanye emaphethelweni. Ngesikhathi elifanayo ukusuka nomunye ezibekwe amapuleti ne sandwich nesinkwa. Okubalulekile! amapuleti Key kufanele kube ihlukaniswa elifanayo (amasentimitha amahlanu) nokukodwa isentimitha kusukwa etafuleni. Futhi kubaluleke! Sithobele, njengoba kuvunyelwene, isitayela. Ayikho izinto Motley! Zonke ifakiwe, nice and organically.
I-oda yelungiselelo izingqimba: wesibili (engajulile) bakufaka elikhulu (hot), kwaba nabantu bezizwe ezixubile sokugcina eateries. Njengoba for indawo Cutlery: ngemfoloko kwesobunxele, ummese kanye spoon ngakwesokudla. Ngamunye isitsha isaladi kufanele kube "siqu" spoon. Izibuko, yewayini futhi yewayini ukubeka ngakwesokudla futhi ukwehla. Yiqiniso, ungakhohlwa ukubuyekeza etafuleni namadivayisi fresh.
Ukukhonza ithebula zezingane
Ngokwengxenye enkulu, umehluko phakathi "omdala" futhi "ingane" ukukhonza eyisipesheli ningagcini. Nokho, eminyakeni yamuva nje iye ngokuya kwaqala ukuvela ku amatafula ware plastic. Yena, ekuqaleni, akusho zephuke ekuqedeni ukulimala ezinganeni (futhi izitsha). Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi manje anikele Ukukhetha omkhulu izingqimba amahle izibuko ukuthi munye kuphela lokubhalela yabo ukunikeza etafuleni ukubukeka zemikhosi. Ikakhulukazi uma ucabangela ukuthi ukudayiswa kuyinto enhle kakhulu, futhi kuba tableware yezingane eyenziwe ngepulasitiki.
I engavamile okwengeziwe ekukhonzeni ithebula zezingane? Mhlawumbe yokuthi, njengoba umthetho, izitsha main kuso - hhayi inyama kanye salads, kanye amaswidi, amakhekhe, izithelo, ice cream. Futhi-ke, ikhekhe. Ngakho-ke kubalulekile ukuba sikhumbule zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama kanye phambi iholide Stocking amathuluzi afanele: nezinkezo, nezinkamba ngoba nama-dessert, ikhekhe spatula, Fruit Baskets. Futhi-ke, yakhelwe besenze nesitayela esifanako - elikhanyayo, zemikhosi, elihambisana mayelana ukugubha eqhubekayo.
Futhi manje amagama ambalwa mayelana nendlela ukwenza bakhonze wakho - etafuleni ukhonkolo - a eyingqayizivele ngempela emnandi. Ukuze wenze lokhu, udinga nje, ukwakha kanye ukuphupha, kubuka, Nokho abanye imithetho. Ngakho, ngokwesibonelo, kwendwangu futhi izitsha ngokuqinisekile kufanele kuhlanganiswe. Ngu mnene elikhazimulayo crystal ingilazi kangcono ukukhetha ezimhlophe lace kwendwangu yetafula. Kodwa izitsha ezenziwe ngobumba "uthanda" ngaphezu indwangu elula. Kepha napkins, kubalulekile ukuthi nazo ngokuvumelana kwendwangu yetafula. Kodwa uma uwasebenzise izinguqulo ezimbili - ethafeni nombala - ngeke neizbity original. Uma ufaka iphepha amathawula ngendlela ekhethekile, ngeke nje kuphela kube engadingekile etafuleni lakho, kodwa kakhulu ngeke ukuhlobisa it. Ngaphezu kwalokho, namuhla ungakwazi ukuthenga "iphepha" imidwebo, ngokuphelele izihloko ezihlobene ukugubha. Futhi ungalokothi libuhlungu zezibani namakhandlela. Futhi Ukukhonza etafuleni New Year ngokuphelele awunakuba khona ngaphandle kokuthethelela kubo. Ikakhulukazi uma ukukhipha ngokufanele. Nokho, la izesekeli kufanele futhi ube nombala owodwa futhi naleli napkins, zokudla kuhlanzekile yini futhi izitsha. Kuyasiza ukuba izinhlobo cute futhi zonke izinhlobo: imicibisholo, kuze kudabuke umhlane, imifanekiso. Zonke lezi imihlobiso podcherkut okhonza njengesosha intuthuko, futhi ubuntu bakho.
Futhi-ke, izimbali. Kungabanjani - isixha nesizotha yobuningi bezimbali zasendle ezinhlobonhlobo noma ikholaji Chic - unquma. Futhi leso senzakalo, mayelana olwaluhlanganisa etafuleni.
Yiqiniso, ilungelo ukubeka itafula ngokuhambisana zonke izimfuneko yokuziphatha - ngokuqinisekile aerobatics. Kodwa ungacabangi ukuthi inqubo enjalo ehlombe kuphela ochwepheshe. Hhayi onkulunkulu, ekugcineni, amabhodwe ...
Yini ukuba adle ukudla kwakusihlwa abantu ezahlukene?
Umbhede ngezandla zakhe
Izindawo zemvelo yeNingizimu Melika zahlukahlukene kakhulu
Keramzitoblok: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo, izincazelo, amanani. Uphenyo zokwakha